Wq/ig/Katherine Paterson - Wikimedia Incubator
< Wq‎ | igWq > ig > Katherine Paterson
File:Katherine Paterson-- Flint Obi (Ngalaba Ụmụaka na Ndị Ntorobịa)(6191952393).jpg
Katherine Paterson (2011)
Katherine Womeldorf Paterson' (amuru Ọktoba 31, 1932) bu onye China amuru Amerịka odee kacha mara amara maka [[w: akwukwo umuaka. | akwụkwọ akụkọ ụmụaka, gụnyere Bridge to Terabithia. Maka akwụkwọ anọ dị iche iche e bipụtara 1975-1980, ọ meriri abụọ Newbery Medal na abụọ Award Book Award.
Okwu ndi okwuruEdit
Ọ gbapụrụ ọsọ gaa n'ebe ochie Perkins. Ọ nweghị ike inye aka ịtụgharị na-ekiri. Ọ gbara ọsọ dị ka à ga-asị na ọ bụ ọdịdị ya. O chetaara ya maka ụgbọ elu nke ọbọgwụ ọhịa n'oge mgbụsị akwụkwọ. Dị nro. Okwu ahụ bụ́ “mara mma” batara ya n’obi, ma ọ kpapụrụ ya ọsọ ọsọ gbagoro n’ụlọ ya.
O chere na ọ nọ n’ọnụ ụlọ ndị nkụzi na ọ bụ mmalite nke oge ọhụrụ ná ndụ ya, o wee kpachaara anya họrọ ime otú ahụ. Ọ dịghị mkpa ka ọ gwa Leslie na ya agbanweela obi ya banyere ya. Ọ maralarị ya.
Mgbe Leslie kwuru okwu, okwu ahụ pụtara n'ụzọ ziri ezi, ị maara na ọ bụ eze nwanyị kwesịrị ekwesị. O siiri ya ike ijikwa Bekee, ma ọbụghị asụsụ uri nke eze.
O werekwa iwe n’ihi na ọ ga-abụ Krismas n’oge na-adịghị anya, o nweghịkwa ihe ọ ga-enye Leslie. Ọ bụghị na ọ ga-atụ anya ihe dị oke ọnụ; ọ bụ na ọ chọrọ inye ya ihe dị ka o kwesịrị iri mgbe agụụ na-agụ ya. [...] Ọ gaghị achị ya ọchị n'agbanyeghị ihe o nyere ya. Mana maka onwe ya ọ ga-enye ya ihe ọ ga-eji na-anya isi.
Ọbụna onye isi nwere ike ịbụ onye nzuzu
"Gịnị kpatara na anyị anaghị agbanwe uwe anyị na-ekiri TV ma ọ bụ ihe ọzọ n'ụlọ gị?" Ọ dị ya ka ịmakụ ya. "Aga m enye anyị kọfị," ka o ji ọṅụ kwuo. "Yuk," ka o kwuru na-amụmụ ọnụ ọchị wee malite ịgba ọsọ maka ebe ochie Perkins, ọmarịcha ọsọ ya mara mma nke na-enweghị apịtị ma mmiri enweghị ike imeri.
Jesse Aarons na Leslie Burke ('mgbe ikpeazụ ha hụrụ ibe ha)
Onyenweanyị, ọ ga-aka mma ka a mụọ n’enweghi ogwe aka karịa ibi ndụ n’enweghị afọ ojuju.
[[w:The Great Gilly Hopkins|The Great Gilly Hopkins]" (1978)
Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla obere ndụ ya kụziiri ya, ọ bụ na mmadụ aghaghị ịbụ onye isi ike. Ma ọ bụghị ya, ị nwere.
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wq/ig/Katherine_Paterson&oldid=5360440"
This page was last edited on 11 March 2022, at 14:15.